Cajun Shrimp Pasta - Fomba Fanamboarana
ny fomba fahandro katsaka mangatsiaka amin'ny cob amin'ny grill
lasopy steak salisbury ao anaty vilany crock
katsaka ambiny amin'ny hevitra cob
aiza no hividianana scallops nofonosina bacon
Cajun Shrimp Pasta dia paty voatabia mamy miaraka amin'ny patsabe, dipoavatra, tongolo ary zava-manitra cajun matsiro be!
Tsotra ny saosy ary tsy mitaky fotoana firy raha ny makamba no voarobaka tsara amin'ny voasarimakirana cajun ankafizinay (Andy Roo's). Ity fahagagana iray-vilany mora ity dia maharitra latsaky ny 30 minitra hatramin'ny vao manomboka ka hatramin'ny farany!
Tianay ny manao an'io fomba fahandro io ho sakafo isan-kerinandro ary azonay antoka fa ho toy izany koa ianao!
Ity lovia ity dia maharitra 30 minitra vao mahavita azy haingana!
Ny saosy dia tsotra sy feno hafanam-po miaraka amin'ny voatabia sy crème apetaka ary ampiana fofona cajun mamy.
Tianay ny paty fa ampio akoho na saosisy raha tianao.
Ny dipoavatra lakolosy maintso sy mena dia legioma an-tananay matetika, raha manana iray na hafa ianao dia io!
Akora sy karazany
PATY Penne pasta no paty mety indrindra hifikiran'ny saosy Cajun, fa fusilli, rotini, na endrika pasta hafa no ampiasaina!
MAKAMBA Shrimp no kintana mamirapiratra amin'ity resipeo ity (na dia soso-tsetroka aza dia fanampiny matsiro)!
legioma Ny dipoavatra lakolosy miloko dia manome endrika kely ny lovia. Manampy tsiro ny tongolo.
saosy Ny saosy dia vita amin'ny akora tsotra nefa feno tsiro. Mampiasa voatabia voatoto izahay fa raha tianao saosy chunky dia miasa koa ny voatabia voatetika.
NY Seasoning Cajun tianao indrindra dia iray nianarantsika tamin'ny kilasy fandrahoan-tsakafo any New Orleans. Ny fizaran-taona an'i Andy Roo dia matsiro sy tototry ny tsiro. Tiako izy ireo satria kely masira noho ny ankamaroan'ny marika nefa mbola manangona totohondry lehibe (ary vita amin'ny Louisana izy ireo).
Raha tsy manana an'i Andy Roo ianao dia manome sosokevitra aho zava-manitra cajun an-trano . Raha mampiasa marika novidian'ny magazay ianao, andramo aloha satria ny marika sasany dia mety ho masira ary avo loatra ny lovia.
Ahoana ny fomba hanamboarana masaka Cajun Shrimp
Cajun Shrimp Pasta dia iray amin'ireo sakafo haingam-pandeha faingana izay manome tsiro matavy.
Atsipazo makamba miaraka amin'ny Cajun Seasoning ary vovoka tongolo lay. Soso-diloilo, esory ary atokana.
Mahandro tongolo miaraka amin'ny dipoavatra sy saosisy.
Afangaroy ireo akora sisa tavela & arotsaha mandra-pahazo matevina.
Manampia parma ary afangaro miaraka daholo. Tsara ery!
Torohevitra ho an'ny pasta lafatra
Safidio ny paty iray izay mitovy sy mitovy habe (ary voahitsakitsaka). Tokony tsy hisy fofona izy ireo ary ho azo antoka fa mafy orina sy be volo izy ireo.
Ny fomba haingana sy mora hanadiovana makamba dia ny manapaka ny tampon'ny lamosina mankany amin'ny rambony. Esory ny akorandriaka hiala amin'ny makamba amin'ny alàlan'ny fisamborana ireo tongotra. Misintona mankany amin'ny rambony ary tokony hiala mora foana ny akorany sy ny tongony ary ny rambony.
Raha mividy makamba voamaina dia safidio miaraka amin'ny rambony ny makamba mba hihinana sakafo mora kokoa.
Mampiasà menaka bacon fa tsy menaka mba hanomezana tsiro bebe kokoa.
Aza be loatra ny pasta (ary aza hadino ny manatsira ny rano).
Tehirizo ao anaty kaontenera voasarona mafy ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 3 andro ny sisa tavela amin'ny Cajun Shrimp Pasta. Ny tsiro dia hifangaro ary hanandrana tsara kokoa!
Tsy mamporisika ny paty mangatsiaka izahay satria manjary malefaka rehefa mihena izany, fa ny Cajun Shrimp Pasta dia mahatonga ny sisa tavela be afaka mankafy ny herinandro rehetra!
Entrées makamba hafa matsiro
Kung Pao Shrimp - tonga lafatra amin'ny vary
Crispy Air Fryer Shrimp - entrée tsotra na mpanamory
Tongolo dibera vita amin'ny tongolo lay
Taco Shrimp - tsara ho an'ny alina Meksikana
Tianao ve ity Cajun Shrimp Pasta ity? Aza hadino ny mamela isa na maneho hevitra etsy ambany!
Fotoana fanomanana10 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafodimy ambin'ny folo minitra Fotoana manontolo25 minitra Fanompoana6 MpanoratraHolly Nilsson Cajun Shrimp Pasta dia lovia lehibe manankarena sy masiaka, ary haingana sy mora ny manamboatra azy! Ny saosisy sy ny makamba miaraka amin'ny alfredo dia mitambatra ao anaty vilany iray mba hahatonga sakafo matsiro proteinina matsiro. pirinty Pin
▢8 ounces penne paty
▢1 farantsanao makamba voahitsakitsaka sy voafitaka
▢rOA tablespoons zava-manitra cajun nizara roa toko
▢rOA tablespoons menaka oliva nizara roa toko
▢1 KELY tongolo diced
▢rOA sakamalaho mena sy maitso, diced
▢8 ounces saosisy nifoka notetehina (tsy voatery)
▢14 ounces voatabia voatoto
▢1 kapoaka crème mavesatra
▢⅓ kapoaka parmesan grated
▢sira sy dipoavatra manandrana
Atsipazo makamba miaraka amin'ny ½ an'ny zava-manitra Cajun sy ny vovo-tongolo lay.
Afanaina ny lapoaly fanendasa miaraka amin'ny menaka oliva 1 sotro ary mahandroa makamba 2-3 minitra isaky ny lafy na mandra-pahamasaka. Esory amin'ny lapoaly ary apetraho.
Mandritra ny fandrahoana sakafo ny makamba dia andrahoy rano mangotraka. Asio paty ary andraho mandra-pahatongan'ny al dente .
Ampio menaka sisa tavela amin'ny lapoely ary andrahoy ny tongolo mandra-pahalefaka azy tokony ho 2-3 minitra. Manampia dipoavatra sy saosisy raha mampiasa sy mahandro mandritra ny 3 minitra fanampiny.
Afangaroy ny voatabia voatoto, ny crème mavesatra ary ny zava-manitra sisa tavela amin'ny cajun. Alefa mandrapaha matevina na 2-3 minitra.
Afangaroy amin'ny paty, parmesan, ary ny makamba ary afangaro mandra-pahafana. Manaova sira sy dipoavatra mba hanandrana.
Safidio ny paty iray izay mitovy sy mitovy habe (ary voahitsakitsaka). Tokony tsy hisy fofona izy ireo ary ho azo antoka fa mafy orina sy be volo izy ireo. Ny fomba haingana sy mora hanadiovana makamba dia ny manapaka ny tampon'ny lamosina mankany amin'ny rambony. Esory ny akorandriaka hiala amin'ny makamba amin'ny alàlan'ny fisamborana ireo tongotra. Misintona mankany amin'ny rambony ary tokony hiala mora foana ny akorany sy ny tongony ary ny rambony. Raha mividy makamba voamaina dia safidio miaraka amin'ny rambony ny makamba mba hihinana sakafo mora kokoa. Mampiasà menaka bacon fa tsy menaka mba hanomezana tsiro bebe kokoa. Aza manadino be loatra ny paty (ary aza hadino ny manatsira ny rano).
Kaloria:575,Karbohidraty:40h,Proteinina:30h,Tavy:33h,Tavy mahavoky:dimy ambin'ny foloh,Cholesterol:275levitra,Sodium:1105levitra,Potasioma:602levitra,Fibre:4h,Sugar:6h,Vitamina A:3160IU,Vitamina C:61levitra,Kalsioma:245levitra,Vy:4levitra
Teny lakilefomba fahandro masaka paty tsara indrindra, paty paty ravina Cajun, fomba fandrahoan-tsakafo paska Cajun, fomba fanaovana paty patsabe Cajun Mazava ho azySakafo hariva, Entree, Main course, Pasta, saosisy, Seafood masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary . img class = 'aligncenter wp-image-219761 habe-feno' lohateny = 'Masaka Cajun Shrimp Pasta matsiro, mamy, matsiro no andrahoina amin'ny saosisy sy dipoavatra. Ny saosy alfredo masiaka dia hahatonga ny tsirairay haniry segondra! #spendwithpennies #cajunshrimppasta #entree #recipe #spicy #easy #withsausage #creamy #best #withpeppers #easyonepot ”src =” img / recipes / 13 / cajun-shrimp-pasta-8.jpg ”alt =” nopetahany Pasta Cajun Shrimp miaraka amin'ny lohateny 'sakan'ny =' 500 ″ haavony = '1000 ″ />